Tsipy kanetibe – « PPF 2019 »: raraka teo amin’ny manasa-dalana ny Malagasy | NewsMada
Tsipy kanetibe – « PPF 2019 »: raraka teo amin’ny manasa-dalana ny Malagasy
Tsy lasa lavitra fa nihintsana teo amin’ny manasa-dalana ny ekipa malagasy, nandritra ny fiadiana ny “PPF” (Passion pétanque française). Nosakanan-dry zareo Frantsay ny dian’ny Malagasy, tamin’ity.
Nifarana, omaly alahady, ny fifaninanana tsipy kanetibe “PPF” (Passion pétanque française), notontosaina tao Fréjus, Frantsa. Raraka teo amin’ny lalao manasa-dalana ny ekipa malagasy, teo amin’ny lalaon’olon-tokana sy ny olon-telo miaraka. Tsy tao amin’ny ekipa malagasy ny vintana, tamin’ity. Resin-dry Dylan Rocher sy i Henri Lacroix ary i Stéphane Robineau, teo amin’ny ankatoky ny famaranana, i Tselonina sy i Mamy ary i Luc.
Niondrika tamin’ny isa, 13 no ho 6, ny Malagasy. Nanantombo teo amin’ny traikefa ny Frantsay, tamin’ity fihaonana ity, na nanao izay ho afany aza ry Luc.
Raha iverenana ny lalana nolalovan’ny Malagasy, tamin’ity, resin-dry Foyot, teo amin’ny fihodinana voalohany, tamin’ny isa 13 no ho 5, isika. Afaka nanarina kosa teo amin’ny fihodinana faharoa ka nivoaka ho mpandresy. Voatery niatrika ny lalao sakana, ry Tselonina ka tafavoaka ary tafita niatrika ny manasa-dalana, saingy tapitra teo amin’izany dingana izany ny lalany.
Marihina fa ny ekipan’i Dylan Rocher sy i Lacroix ary i Robineau no nandrombaka ity “PPF 2019” ity, rehefa nandresy an-dry Ligan Doerr sy i Marco Foyot ary i Fazzino, tamin’ny isa 13 no ho 8.
Nitovy tamin’izay ihany koa ny vokatra teo amin’ny olon-tokana, natrehin’i Tselonina. Ilay Frantsay, i Dylan Rocher, no nandavo azy, tamin’io dingana io. Resin’i Dylan, tamin’ny isa mazava, 13 no ho 7, ny tovolahy. Raha fehezina, hita fa nisy fikirizana ny ekipa malagasy, saingy tsy ampy lalao ry zalahy. Nanampy trotraka ihany koa ny tsy fifantohana madinidinika teny an-tsefantsefany teny ka nampisy ilay antsoina hoe “passage à vide”.